Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fiadanana amin'ny alàlan'ny fizahantany ankehitriny - na dia tsy vitan'ny hoe
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany
Mpanoratra Max Haberstroh
Ny fandriampahalemana dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny ady – tsy misy fandriampahalemana, tsy misy fizahan-tany. Marina fa manana ny mahery fony ny ady, fa ny fiadanana kosa manana ny ‘mahery fo mangina’. Amin'ny vanim-potoanan'ny COVID dia ny mpitsabo mpanampy, ny dokotera, ny laharana voalohany ary ny serivisy. Ny hotely SME, ny trano fisakafoanana ary ny tompon'ny trano fisakafoanana, ary ny mpiasa izay manome serivisy fitsaboana sy fahasalamana araka izay azo atao miaraka amin'ny saron-tava sy ny fanalavirana - ary ny fahafantarana fa ny fanakatonana iray hafa dia handrava ny orinasa.
Rehefa tonga ny tondra-drano, nandrava saha, trano, fotodrafitrasa ho an'ny daholobe, ary ny fiveloman'ny olombelona, ​​dia nirohotra nanampy ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny akaiky sy lavitra mba hanampy noho ny fiantrana.
Nanome tamin’ny fo manontolo ny olona.
Any amin’ny faritra ravan’ny doro tanety, ireo mpamono afo be herim-po, izay matetika tsy misy antenaina intsony noho ny herin’ny tafio-drivotra, dia niady mafy andro aman’alina, mandra-pahavitrika tanteraka.
Tampoka teo, ny fitiavan-tena, ny hedonisma ary ny fampiononana, raha tsy izany dia nampalahelo toy ny famantarana ny fitondran-tena tsy mety, dia nahatsapa ho voaroaka, tsy misy afa-tsy ny faniriana hitia ny namanao. Ny cataclyss dia mamorona ny lalàny manokana. Nahazo ny mahery fony ny fotoana fandriampahalemana, ary amin'ny fotoanan'ny loza sy ny loza dia mety hampiseho ny lafiny ilany ny olona – mety ho ny tsara indrindra ho azy ireo izany.
Sarotra ny asa, tena misy ny fihemorana, tena ilaina ny fanantenana. Ny vonjy taitra eo no ho eo dia mora mipoitra voalohany - ary haingana - fanampiana, fa ny fivoarana izay mihamitombo tsikelikely mahafaty dia tsy ampy ny fahatsiarovan'ny olona ny hetsika haingana. Ny fananana, azo tsikelikely, dia handany ny fotoana hamoahan'izy ireo, raha eo am-piandrasana ny fahafahan'ny tsirairay ho an'ny tompon-daka.
Amin'ny ankapobeny, ny herim-po amin'ny fotoanan'ny fandriampahalemana sy ny vonjy taitra dia mety ho tsy dia mampitolagaga, fa tsy latsa-danja kokoa (“tsy isalasalana fa azo sary an-tsaina ny pacifism mahery fo”, hoy izy. Albert Einstein). Ny fihavanana dia tsy mpilalao tena; ny fiadanana no vokatry ny asantsika. Tsy ilaina ny milaza fa manome fanamby tena izy ho an'ireo mpanatanteraka Travel & Tourism amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny fifandraisana izany!
Amin'ny maha mpivahiny anay dia mandoa vola izahay amin'ny fialan-tsasatray. Midika izany fa mankasitraka ny mankafy ny fialan-tsasatray izahay mihoatra noho ny vola naloanay tamin'izany. Tokony ho fantatsika ny tombontsoa ho vahiny amin'ny mpampiantrano antsika. Ny fitondran-tena ara-tsosialy dia fanalahidy amin'ny fiaraha-miaina. Amin'ny lafiny iray, raha mahatsapa isika – amin'ny maha-mpiantrano antsika – fa ny fampiantranoana atolotray ny mpitsidika antsika dia atahorana hiafara ho karazana fandraisan'ny vahiny fankahalana, dia voahitsakitsaka mafy ny fahatokisan-tenantsika ara-tsosialy. Ny famoronana fanitsakitsahana sy tsy firindrana dia fomba iray hafa mahatonga ny fandotoana ny tontolo iainana.
Ny 'maso' antsika amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny tontolo iainana sy ny fiaraha-miory amin'ny olombelona dia tokony ho maranitra, mba hahafantarana izay mahasoa ny tontolontsika ara-batana (ety ivelany) sy ara-tsaina (anatiny). Tsy misy afa-tsy ny fiadanana, raha mamaka lalina ao anatintsika amin'ny maha-isan'ny tsirairay antsika, izay mizara ny fahatsapana ny maha-izy azy. Ny Travel & Tourism dia manome sehatra manerantany ho an'ny fanao tsara - na ratsy. Nisy niteny hoe, toy ny maso tsy mahita ny tenany izy. Mety hianatra hampahatsiahy ny fomba fijeriny ny tontolo iainany izy, mitovy amin'ny talentan'ny mpaka sary mivoatra.
Raha jerena ny fitakian'ny Tourisme mba hampiroboroboana ny fahatakarana iraisam-pirenena, dia mety ho hitantsika hoe: Ny tena ratsy indrindra dia sandoka izany (ohatra ny fitsangatsanganana rehetra!), raha ny tsara indrindra dia ny firavoravoana. Mamelona ny angano nozarain'ireo mpandray anjara fa hanjavona ny fitsarana an-tendrony, ary mamporisika ny fanantenana mangina nozarain'ny tenanay, ny mpanao dia lavitra, fa tsy hitranga mihitsy izany, ary afaka mijoro amin'ny hevitra manara-penitra izahay. Raha tokony ho eo an-toerana no mifanena amin’ny mpiray tanindrazana. Ny voka-dratsin'ny farany ambany mankany amin'ny fahatakarana iraisam-pirenena dia kely indrindra: Na dia eo aza ny fidirana amin'ny fitsangantsanganana, ny mankafy ny zavakanto culinary ataon'ny mpampiantrano na ny fitetezam-paritra miloko miantsena, ny ankamaroan'ny fifandraisana amin'ny fialantsasatra dia tsindraindray sy tsy misy dikany fotsiny. Manjavona izy ireo rehefa mandeha ny fotoana, toy ny fanaon'ny fitsangatsanganana indraindray.
Nipoitra ny endrika ivelany ny 'Tourism Unlimited' noho ny zava-misy fa lasa manjavozavo na voafafa tanteraka ny marika ara-tsosialy teo aloha. Ny toerana fialan-tsasatra taloha noheverina ho manokana dia atolotra amin'izao fotoana izao amin'ny katalaogy na tranonkala rehetra.
Ny toerana sasany dia nandalo fiovana miavaka indrindra, ohatra Baden-Baden: Nalaza teo aloha ho 'renivohitry ny fahavaratra any Eoropa', izay nanaovan'ireo mpanankarena sy tsara tarehy ny 'Vanity Fair' azy manokana, ilay tanàna spa-spa ankehitriny dia toeram-pitsaboana ary fahasalamana ho an'ny mpanjifa amin'ny fiahiana. – Na mifidiana Madeira, izay any amin'ny toeram-pitsaboana miavaka ao anatin'ny toetr'andro malefaka dia niverina indray ny saranga ambony eran'izao tontolo izao: Ankehitriny dia toerana fitsangantsanganana sy fitsangantsanganana ny nosy.
Mbola zava-dehibe kokoa, ny trangan'i Venise: Niavaka ho Lova Iraisam-pirenenan'ny Firenena Mikambana, i Venise dia voatafika hatramin'ny vao haingana nataon'ireo mpizaha tany avy amin'ny sambo mpitsangantsangana mahery vaika manohintohina ny maha-zava-dehibe ny tanàna sy ny fahatonian'ny mponina eo an-toerana. Noraisin'ny mponina ho toy ny fanafihana ity karazana fanafihana ity – ho an'ny tanànany sy ny fiainany ara-tsosialy.
Mitovitovy amin’izany ny toe-javatra any an-kafa: Nanomboka simba nanomboka tamin’ny taonjato faha-15 i Angkor, izay tanàna fahiny tao amin’ny tempoly hindoa-bodista be voninahitra an’ireo mpanjaka Khmer, ary nanjary tsy nisy hadino intsony. Inoana fa ny fiovaovan'ny toetr'andro (!) sy ny fisainan'olombelona no nahatonga ny faharavan'i Angkor.
Tamin'ny taonjato faha-19, ireo mpikaroka frantsay vao nahita ireo rava ary nitondra an'i Angkor ho an'ny andro. Taorian'ny ady tany Vietnam dia nandresy azy ireo ny Khmer Rouges kominista. Ankehitriny, lasa ny Khmer Rouges, ary “ny andiana gidro sy mpizaha tany” (Christopher Clark, Aostraliana mpahay tantara) dia naharesy indray ireo rava ny tempolin’i Angkor Vat sy Angkor Thom.
Ao amin'ny 'Expansion du tourisme', Ramatoa Anita Pleumaon ao amin'ny Ekipa Mpanadihady sy Manara-maso ny fizahantany (tim-ekipa) dia mamintina hoe: “Ny soatoavina maoderina, napetraka amin'ny fiaraha-monina Aziatika amin'ny fivoarana haingana, dia toa niteraka voka-dratsy manokana sy fahatsapana korontana, fanavakavahana, korontana ary tsy fahatomombanana. Ny dingan'ny varotra sy ny homogenization ary ny fivezivezena goavana amin'ny hevitra vaovao, sary ary vaovao dia namela toerana kely ho an'ny fomban-drazana, ny fanehoana kolontsaina, ny soatoavin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. " Moa ve ny fomba fiasantsika amin'ny fananganana sabatra roa lela satria ny lojika sy ny fomba fiasany dia manaraka ny fomba tandrefana? Misy fitoviana ve eo amin'ny ezaka mafy ataontsika amin'ny 'fananganana toerana' sy ny foto-kevitry ny 'fananganana firenena' taorian'ny Ady Mangatsiaka?
Ny porofo mahery vaika indrindra amin'ny tsy fitovian'ny demokrasia amin'ny fomba tandrefana sy ny fananganana firenena dia azo jerena ao Afghanistan. Afganistana, tamin'ny taona 1960 sy 70, toerana fitsangatsanganana mampientam-po sy lanitra ho an'ireo niala tany Eoropa, dia nanomana tamim-pahombiazana ny tany ho an'ny faharesen'ny firenena matanjaka roa: ny tafika sovietika tamin'ny 1989 sy ny tafika OTAN notarihan'i Etazonia tamin'ny Aogositra 2021. Ny Sovietika, Afganistana dia lalaon-kery fotsiny, ho an'i Etazonia sy OTAN dia ivon'ny fampihorohoroana iraisam-pirenena sy fierena an'i Osama Bin Laden, ilay mpampihorohoro ambony 9/11.
Ny tanjon'ny fitsabahan'ny miaramila US-NATO dia ny hanongana ny governemanta Taliban tamin'izany fotoana izany ary hisambotra an'i Bin Laden. Tanteraka ireo iraka roa ireo, saingy ny fanamby lehibe kokoa dia nitarika ny firaisankina tandrefana mba “hijanona kely”, mba hanamafisana an'i Afghanistan ho demokrasia amin'ny fomba tandrefana. Tsy nahomby tamin'ny fomba mahamenatra ity tanjona ity, niverina ny milisin'ny tantsaha Taliban ary nanery an'i Etazonia sy ny OTAN handao an'i Afghanistan harum scarum – miaraka amin'ny maro maty, naratra na ratram-po, vola lany an'arivony tapitrisa, ary fisalasalana lehibe sisa. Miafara amin’ny fanontaniana maharitra mandrakizay izy ireo nefa mbola tsy voavaly hoe: Nahoana?
Nipoitra indray ny fampahatsiahivana manjombona momba ny Adin'i Vietnam. Ny sarin'ny fandosiran'ny angidimby avy amin'ny tafon'i Saigon tamin'ny 1975 dia natambatra tamin'ny 2021, tamin'ny sarin'ny fiakarana an-danitra avy any amin'ny seranam-piaramanidina Kabul, feno olona kivy, ny sasany amin'izy ireo mifikitra amin'ny sambon'ny fiaramanidina ary mianjera…
Iza no meloka? Iza no mandray andraikitra? Ahoana ny amin'ny lesona azo?
Ny tompon'andraikitra dia ireo rehetra izay tsy afaka mahazo na tsy nety nandray lesona izay tokony ho efa nianarany teo aloha: voalohany, ny lamina ara-piarahamonina sy ny fomba fiaina ara-piarahamonina dia tsy azo afindra amin'ny hafa an-keriny – na aiza na aiza ary tsy ao Afganistana mihitsy; faharoa, ny asan’ny miaramila dia ny miady, fa tsy ny manangana sekoly, hopitaly, na fantsakana; fahatelo, na ny tetikasa miaramila na sivily dia mila vina henjana sy ara-potoana, na tanjona izay tsy maintsy atao ho an'ny rehetra — fa tsy ny fomba fiasa tsara natao fotsiny miaraka amin'ny fiafarana misokatra sy ny hevi-diso avo be; Faharoa, ny fifandraisana mifamatotra eo amin'ny sangany eto an-toerana sy ny mpiara-miombon'antoka vahiny dia manana fironana matanjaka amin'ny fanaovana kiantranoantrano sy ny kolikoly. Tsy maintsy hitarika fifandonana na ady mihitsy aza ity karazana 'mpampiasa lozam-pifandraisana' ity ary hiteraka korontana miboridana amin'ny farany.
Matetika loatra, taorian'ny fanoloran-tena ara-tafika antsasak'adiny nefa naharitra ela, ny safidy tsara indrindra ataon'ireo mpiara-miombon'antoka vahiny dia toa miala amin'ny toe-javatra - miaraka amin'ny traikefa miverimberina amin'ny sidina mahamenatra, fa tsy ny fiaingana milamina, nefa antenaina ankehitriny miaraka amin'ny lesona fototra ianarana: ny mitazona. avy amin'ny olana anatiny ao amin'ny firenena hafa, indrindra rehefa sarotra ny miala amin'ny fahasamihafana ara-tsosialy sy kolontsaina. Ilay mpanoratra anglisy-Holandey Ian Buruma dia milaza ny 'fandriky ny fanjanahantany' ireo hery lehibe izay mora latsaka ao, taloha sy ankehitriny.
Tsy lavitra loatra ve ny hampiharana ny foto-kevitra momba ny 'fandrika fanjanahantany' ho an'ny ONG fanampiana amin'ny fampandrosoana? Ny fanoheran'ny fanampiana amin'ny fampandrosoana dia mikendry indrindra ny toetra maharitra amin'ny tetikasa ara-teknika maro, miaraka amin'ny fikasana manidina fa tsy misy vokatra azo tsapain-tanana fotsiny. Marina fa ny manam-pahaizana vahiny dia mety handray soa tsy amin'ny maha-mpanohana sy mpampiofana an-tanana, fa amin'ny maha-mpanelanelana azo itokisana eo amin'ireo vondrona liana eo an-toerana ihany koa. Ny fampandrosoana ny fizahantany amin'ny atiny sy ny mari-pamantarana isan-karazany dia tsy misy afa-tsy afa-tsy. Indrisy, tena misy ny fakam-panahy fa ny olona iray dia miditra loatra amin'ny raharaha anatiny ao amin'ny firenena mpampiantrano iray, ary ny fialan'ny manam-pahaizana iray dia mety haka sary an-tsaina ny zava-misy fa lasa anisan'ny olana izy, fa tsy ny vahaolana.
Mazàna dia tena ankasitrahana tokoa ny manonona teny mazava nefa noho ny fiheverana mahatsikaiky momba ny firaisan'ny etimolojikan'ny 'Fizahantany' sy ny 'fampihorohoroana', mety hahafaty ny fitenenan-dratsy: Tia fahafahana ny fizahan-tany, mila fankahalana ny fampihorohoroana. Ny fizahantany, amin'ny fiteniny ratsy indrindra, dia mety hamono moramora ny kolontsaina eo an-toerana, fa ny fampihorohoroana kosa dia mamono avy hatrany, na lasibatra na kisendrasendra, tsy misy indrafo, nefa ny fizahantany no iray amin'ireo niharam-boina voalohany.
Tsy afaka mamony ny fizahan-tany, izay mirongatra ny fampihorohoroana, mila fandriampahalemana ny fizahantany. Ahoana no ilazana fa ny Travel & Tourism dia mandray anjara amin'ny famoronana sy fitandroana ny fandriampahalemana? Efa nisy nandre ve ny anjara toerana lehibe nataon'ny fikambanana iray Fizahan-tany, miaraka amin'ny hafa, mba hitazomana, hoy, i Afghanistan ho firenena milamina sy mandefitra mihitsy aza ary toerana fizahan-tany, toy ny tamin'ny taona enimpolo?
Roapolo taona teo ho eo taorian'ny ady, lasa toerana fitsangatsanganana mahafinaritra i Vietnam, eny fa na dia misy fitondrana kominista ao anatin'ny tontolo kapitalista (!), ary fifandraisana am-pirahalahiana amin'i Etazonia sy izao tontolo izao. Ny fifampiraharahana ara-politika, ny tambajotran'ny orinasam-pandraharahana, ary ny fitsidihan'ny Filoha Clinton manan-tantara tamin'ny taona 2000 dia nahatonga ny fanamorana ny fifandraisan'ny governemanta sy ny sehatry ny fandraharahana ho azy ireo. Nanaraka izany ny Travel & Tourism, saingy sarotra ny mitadidy ireo dingana teo aloha izay mety naneho ny fanoloran-tenan'ny UNWTO na WTTC.
Afaka mandray an'i Vietnam ho toy ny drafi-drafitra feno fahasahiana ho an'ny 'normalisation' ny fifandraisana amin'ny Emira Afghanistan ve isika? Azontsika antenaina indray ve ny fizahan-tany tendrombohitra manaitra ao amin'ny Hindu Kush manodidina ny taona 2040 – miaraka amin'ireo Taliban Islamista ho mpitarika mpizahatany mahafinaritra?
Adala loatra, mety hieritreritra ny olona iray, mihifikifi-doha – nandritra ny roapolo taona taorian'ny Adin'i Vietnam, Samuel P. Huntington dia namoaka ny sarimihetsika ara-politika 'The Clash of Civilizations'. Ny teorian'i Huntington fa ny ady amin'ny ho avy dia tsy hisy ady eo amin'ny firenena fa ny kolontsaina, mitarika amin'ny adihevitra mampiady hevitra - ary ny fitsanganan'ny 'Dialogue Among Civilizations', izay manohitra ny thesis izay niaro an'i Hans Köchler, filozofa Aotrisy tamin'ny 1972, tamin'ny taratasy nalefa ho an'ny UNESCO ary tavela ao anaty fanadinoana.
Moa ve ny zava-misy ankehitriny dia tsy hanamarina ny fitsabahan'ny Travel & Tourism, miaraka amin'ireo fikambanana faratampony UNWTO sy WTTC, mba hanampy amin'ny fanavaozana ny fifanakalozan-dresaka eo amin'ireo 'sivilizasiona', amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao mifanandrify sy nomerika, miharihary sy an-kery, amin'ny anaran'ny hevitra hanao “ Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany – na dia tsy vitan'ny hoe”?
Ny hafatra dia mitaky ny fampidirana mpiara-miombon'antoka mitovy hevitra ao anatiny sy ivelan'ny Travel & Tourism, mba hifanaraka amin'ny eritreritra sy ny hetsika. Mety ho aingam-panahy avy amin'ny hevitra navoakan'i Louis D'Amore tamin'ny fomba idealy sy tamin-kafanam-po ary niaro azy ho mpanorina sy filoha hatry ny ela ny 'Ivotoerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany.
Eny ary, aoka ny nofinofy ho tombontsoa ho an'ny be fanantenana sy esoeso ho fitaovam-piadiana ho an'ny tsy manan-kery — ny mahery dia hanana ny olan'izy ireo manokana: Raha mbola tafaverina tamin'ny traikefany 'Afghanistan' ny Orsa Rosiana ary nanitsy ny tenany indray, ny Voromahery Amerikana sy ny transatlantika. Ny kôlômbia dia mbola variana milelaka ny ratrany noho ny asa nanirahana azy. Ny Dragona Shinoa dia tsy afa-miala amin'ny tsiky ratsy noho ny fahafaham-baraka ataon'ireo mpifaninana aminy manerantany. Toa izao tontolo izao dia mitsambikina avy amin'ny Ady Mangatsiaka avy hatrany mankany amin'ny Fiadanana mangatsiaka. Midika kely kokoa noho ny fampitsaharana ny ady fotsiny izany, nefa mety hampidi-doza ny fiovaovan'ny toetr'andro ara-politika 'mafana', mety tsy manaraka ny 'tsipika' ny kolontsainan'i Huntington, fa eo amin'ny lafiny andrefana sy atsinanana mahazatra. Sarotra ny mandingana ny hevitra fa ny fahajambana ara-politika dia mety hiteraka “modely, miainga amin'ny fiverenan'ny zava-mitranga – fa ny ankamaroany ihany”, araka ny voalazan'ilay filozofa Leibniz. Fatiantoka toy inona moa ny famoronana ara-politika hatramin'ny nanjavonan'ny vy!
Misy hevitra mampihomehy iray hafa momba ireo lamina ireo: “Rehefa miditra amin’izao tontolo izao ho jiolahy ny olona, ​​dia hanery azy hiaina toy ny jiolahy izao tontolo izao. Izany no valintenin'izao tontolo izao, azo lazaina fa valifaty,” hoy i Ludwig Fusshoeller ao amin'ny 'Die Dämonen kehren wieder' ('Ny fiverenan'ny Daemon'). Ireo mpitsidika izay heverina ho mpanafika, dia horaisina ho toy izany, na mpizaha tany tsotra, na mpanao raharaham-barotra - na tafika vahiny! – Inona no azontsika lazaina? Tsy ho ampy ny 'Veloma amin'ny fandraisana ny kolontsaina'.
Ao amin'ny tantara malaza Goethe, ny tena tanjon'i Faust dia voafaritra amin'ny fandreseny manokana ny natiora. Na izany aza, toy ny mahatsiaro tena faly tokoa izy tamin'ny fanatanterahana ny tetikasany izay mifantoka amin'ny fitiavan-tena, dia very tamin'ny filokana tamin'i Mephisto izy ary nitalaho hoe: “Avy eo, amin'izao fotoana izao dia sahiko ny miteny hoe: 'Mijanòna kely! Tena mahafinaritra ianao!'”
Raha mijery ny planetantsika isika ankehitriny, dia fantatsika fa niverina miharihary ny 'tontolo Faustian', raha toa kosa ny famirapiratana indray no nampiakanjoina indray ny famirapiratry ny famirapiratana tamin'ny lasa sy ny fanirian'ny mpampiantrano sy ny mpitsidika tsy lany andro, izay nomen'ny ozona manenjika ny valan'aretina - “hijanona kely…”
Ny mpanoratra, Max Haberstroh, dia mpikambana mpanorina ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN).